Iindaba - Umatshini weHydraulic
kwimarike e Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Yangtze River Delta, Pearl River Delta, ezisetyenziswa ukuvavanya umbhobho ezifana engenan- umbhobho sentsimbi, umbhobho intsimbi engatyiwa, umbhobho titanium ingxubevange, umbhobho yobhedu, umbhobho aluminiyam. Isiseko esikhulu senkampani yethu kukuvelisa umshicileli we-hydraulic ukubonelela ngezixhobo eziphambili kunye nezikumgangatho ophezulu wokuvavanya umsantsa kwimarike. Umatshini wokushicilela we-hydraulic unokwahlulwa lube luhlobo oluzenzekelayo kunye nohlobo lwencwadi. Uhlobo lwencwadi olunokuvavanywa kwimibhobho emine ngaxeshanye, kodwa lufuna umsebenzi wezandla. Ukubeka indawo, ukutywina, ukucofa kunye nokucinezela kuzenzekelayo. Ubude bombhobho bunokuhlengahlengiswa nge-2-15m ukuhlangabezana neemfuno zemibhobho eyahlukeneyo yomthengi.
Uhlobo oluzenzekelayo: ityhubhu enye kuphela inokuvavanywa ngexesha. Umbhobho ngokuzenzekelayo ungena kwi-rack, ngokuzenzekelayo izinto zokwenza izinto, iintlobo ezizenzekelayo, izikhundla, ukucoca, ukutywina, ukubamba kunye nokucinezela ngokuzenzekelayo; icandelo lephepha elisezantsi ngokuzenzekelayo lihlela ngokuzenzekelayo iimveliso ezizezona zinesiphene. Idlala indima ebalulekileyo kwimveliso yokwenyani. Enye kukonga iindleko, kodwa kokonga abasebenzi kunye nokuphucula izinga lokuhlaziywa kwemibhobho.
Umatshini wokushicilela we-hydraulic oveliswa yinkampani yethu usetyenziswa ngokubanzi ekufumaneni umgangatho wemveliso yabavelisi bemibhobho, kwaye kubalulekile kwaye kubalulekile ekufumaneni nasekuqhumiseni izixhobo. Ngoku yenziwe ngempumelelo: uhlobo lwencwadi kunye nohlobo oluzenzekelayo. Wamkelekile abathengi abatsha nabadala ukuba bathethathethane!